ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နံရံ၏ installation အစီအစဉ် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
၏အဓိကပြproblemsနာများ အပြင်ဘက်တွင်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် LED စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်:
(1) ပြင်ပမှာအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများ, မကြာခဏနေနှင့်မိုး, ဖုန်မှုန့်အဖုံးမှုတ်လေ, အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးသည်. အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်အလေးအနက်ထား damped လျှင်, ၎င်းသည်တိုတောင်းသော circuit နှင့်မီးသို့ပင် ဦး တည်သွားလိမ့်မည်, အမှားနှင့်ပင်မီးအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့;
(3) ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အလွန်မြင့်မားပြီးအပူလွန်ကျူးမှုမကောင်းပါက, ပေါင်းစပ်ထားသောဆားကစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့် display system ပုံမှန်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး;
(4) ပရိသတ်ရဲ့အကွာအဝေးကျယ်ပြန့်သည်, ရူပါရုံကိုအကွာအဝေးဝေးဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ရူပါရုံကို၏အကွာအဝေးကျယ်ပြန့်သည်; ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းသည်အလွန်ပြောင်းလဲသွားသည်, အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ.
အထက်ပါအထူးတောင်းဆိုမှုများအတွက်, ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ရန်လိုအပ်သည်:
(1) မျက်နှာပြင်ကိုယ်ထည်၊ မျက်နှာပြင်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အဆောက်အအုံ၏တင်းကျပ်စွာရေစိုခံရန်နှင့်ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်; မျက်နှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းသောရေနုတ်မြောင်းအစီအမံများနှင့်အတူပေးအပ်ရပါမည်, အရာရေစုဆောင်းခြင်း၏အမှု၌ချောချောမွေ့မွေ့ထုတ်ပေးနိုင်သည်;
(2) လျှပ်စစ်ကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းများကိုအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်နှင့်အဆောက်အ ဦး များတွင်တပ်ဆင်ရမည်. အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အဓိကကိုယ်ထည်နှင့်အခွံကိုကောင်းစွာအခြေပြုရမည်, and the grounding resistance shall be less than3ohm, so as to release the large current caused by lightning in time;
(5) ပြင်းထန်သောပတ် ၀ န်းကျင်အလင်း၏အကွာအဝေးတွင်မြင်နိုင်ရန်သေချာစေရန်, ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောအလင်းရောင် LED ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်;
(6) အသစ်ကကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်ပြွန် display ကိုအလတ်စားအဖြစ်ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်, အရာကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်ရှိပါတယ်, စင်ကြယ်သောအရောင်, တသမတ်တည်းသဟဇာတ, နှင့်ထက်ပိုမိုတဲ့သက်တမ်းရှိပါတယ် 100000 နာရီ. Display medium ရဲ့အပြင်ဘက်အထဲမှာ edge shield နဲ့အကျော်ကြားဆုံး square cylinder, silica gel နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားပြီးသတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းလည်းမရှိပါ. ၎င်းသည်အသွင်အပြင်နှင့်လှပပြီးလှပသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်, နှင့်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ် “ကာကွယ်တားဆီးရေးငါးခု” တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်၏, ဖုန်မှုန့်, ရေ, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်တိုတောင်းသောဆားကစ်.